कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका साढे १३ लाख नागरिकले तत्काल दोस्रो डोज नपाउने -
काठमाडौं– सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप (कोभिसिल्ड) तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा तारानाथ पोखरेलले कोभिसिल्ड खोप तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने बताए। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लाइभ अपडेटमा बोल्दै डा पोखरेलले कोभिसिल्ड खोप तत्काल उपलब्ध हुने सम्भावना नरहेको बताएका हुन्।
सरकारले गत फागुन २३ गतेपछि देशभरमै ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई कोभिसिल्ड खोप लगाउन शुरु गरेको थियो। यस्तै, १४ जिल्लामा ५५ वर्षका माथिका व्यक्तिलाई पनि खोप लगाउन थालिएको थियो।
कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका देशभरका ६५ वर्ष र १४ जिल्लाका ५५ वर्षमाथिका गरी साढे १३ लाख व्यक्तिले तत्कालै दोस्रो डोज लगाउनुपर्ने भएको छ। तर, सरकारले भने ती व्यक्तिलाई अहिलेकै अवस्थामा खोप उपलब्ध गराउन नसकिने बताएको हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोपको पहिलो मात्रा लगाएको ८ देखि १२ हप्तासम्ममा दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्ने जनाएको छ। तर, दोस्रो डोज लगाउनका लागि भारतीय कम्पनीबाट खोप प्राप्त हुन नसकेको डा पोखरेलेको भनाइ छ।
सरकारले कोभिसिल्ड खोपको विकल्पमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका र कोभ्याक्सबाट उपलब्ध हुने अन्य खोप प्राप्त गर्ने विषयमा दाताहरुसँग छलफल भइरहेको डा पोखरेलले जानकारी दिए।
खोपको विषयमा डा पोखरेलको भनाइ उनकै शब्दमा–
सबै नागरिकले खोप कहिले लगाउने ? नेपाल सरकारले के गरिहेको छ ? भनेर प्रश्न गर्ने गर्नुभएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, गत वर्षदेखि नै, यो महामारीको शुरुवातासँगै, विश्वमा अब खोप उत्पादन हुने र प्राप्त हुने जानकारी आएलगत्तै नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकहरुमध्ये १५ वर्ष माथिकालाई खोप लगाउने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको र बजेटको व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले खोप कार्यक्रम पनि संचालन गरिसकेको अवस्था छ।
तर, अहिलेसम्म १८ वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि मात्रै खोप उपलब्ध भएकाले १८ वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिलाई लगाउने खोप परीक्षणको चरणमा नै रहेको छ। नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय संयन्त्रहरु प्रयोग गरेर खोप प्राप्तीका लागि प्रयास गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिबाट पनि आफ्ना सहकक्षीमाफर्त भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशमा खोप प्राप्तीका लागि कुराकानी भएको जानकारीमा आएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गरेको छ। खदिरका लागि पनि कम्पनीहरुसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्पर्क गरिरहेको छ।
यस्तै, कोभ्याक्स फ्यासिलिटीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागले समय–समयमा हाम्रो आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल नभइ नहुने खोपको बारे, महामारीको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएर पत्राचार भइरहेको छ।
तर, हामीलाई कहिलेसम्म, कति खोपहरु आउने भन्ने यकिन जानकारी सहितको चिठ्ठी (पत्र) भने प्राप्त हुन सकेको अवस्था छैन।
कोभिसिल्ड खोप लगाएका ६५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकले ‘दोस्रो खोप कहिले पाउने ?’ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। हामीले १४ जिल्लामा ५५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरुलाई र अन्य बाँकी जिल्लाहरुमा ६५ वर्ष माथिका नागरिकलाई कोभिसिल्ड खोप लगाएका थियौं। त्यो खोप लगाएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले ८ देखि १२ हप्तामा दोस्रो मात्रा लगाउन भनेको थियो।
हामीले त्यसैअनुसार निर्देशिकाहरु बनाएर जानकारी गराएका थियौं। अब करिब ११ हप्ता वितिसकेको छ। फागुन २३ भन्दा पछि खोप प्राप्त गर्नुहुने हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरु तथा नागरिकले खोप लगाउने मिति नजिकै आउँदा पनि, अहिलेसम्म हामीले विभिन्न प्रयास गर्दा पनि, तत्कालै कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा उपलब्ध हुने सम्भावना तत्काल नदेखिएको अवस्था छ।
तर, नेपाल सरकारले त्यसको विकल्पमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका र कोभ्याक्सबाट उपलब्ध हुने अन्य खोपहरुको विकल्पको बारेमा दाताहरुलाई, विशेष गरेर कोभ्याक्स फ्यासिलिटीलाई– हामीलाई नभइ नहुने करिब साढे १३ लाख नागरिकलाई दोस्रो मात्रा लगाउनका लागि कुनै पनि अवस्थामा कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनिका वा एस्केबायो एउटै प्रकृतिको खोप उपलब्ध गराइदिनु भनेर पहल गरिरहेका छौं।
यसमा सकारात्मक जवाफ आएपनि प्राप्त हुने मिति हामीलाई जानकारी आएको छैन। खोप प्राप्त हुनेवित्तिकै १२ हप्ता कटेपनि पहिलो मात्रा लगाएकालाई खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने तयारी गरेका छौं।
भारतमा १६ हप्तासम्ममा पनि खोप लगाउँदा त्यसको प्रभावकारीता शुन्य हुँदैन र रोगबाट बचाउन मद्दत पुर्‍याउँछ भनेर प्रमाणित भएको छ।
यस्तै, कुनैपनि खोप नपाएको ६० देखि ६४ वर्षका नागरिकले ‘कहिले खोप पाउने?’ भन्ने प्रश्न पनि आएको छ। हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। छिमेकी मुलुक चीन सरकारबाट केही खोप प्राप्त हुने र खरिदका लागि पनि प्रक्रियाहरु अगाडि बढेको अवस्था छ।
अमेरिकी सरकारसँग पनि कुराकानी भइरहेको र हामीलाई खोप प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको छ। अब आउने खोप त्यो समूहलाई लगाउन प्राथमिकीकरण तोकिएको छ।
यस्तै, भेरोसेल खोप लगाएर देशका विभिन्न भागमा बसेका नागरिकलाई दोस्रो मात्रा लगाउन सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने क्रममा बागमती प्रदेशका ७ जिल्लामा पहिलो र दोस्रो चरणमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौं।
त्यो बीचमा निषेधाज्ञा लागू भएपछि नागरिकहरु विभिन्न जिल्लामा गएका कारणले उनीहरुका लागि र विभिन्न मेडिकल कलेजहरुमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रदेशमा खोप पठाउने निर्णय गरिसकेका छौं। खोप प्राप्त गरेपछि छुटेका नागरिकले खोप लगाउन सक्नुहुनेछ।
हामीले भेरोसेलको दोस्रो मात्रा ४ हप्तामा लगाउने भनेका थियौं। ४ हप्ताभन्दा केही ढिला भयो। तर, केही विग्रिदैन, खोप प्राप्त हुनेवित्तिकै लगाउनु पर्छ। यसको प्रभावकारिता केही कम भएपनि प्रभावहीन भने हुँदैन।
बालबालिकाहरु संक्रमण हुने संख्या बढ्दै आएको छ। विद्यालय अहिले बन्द छ। विद्यालय खुल्दा बालबालिकाका लागि खोपकोव्यवस्था के छ? भनेर पनि प्रश्नहरु आएका छन्।
हामी सबैलाई थाहा छ– १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुका लागि खोपको परीक्षण भएपनि अहिले विश्व बजारमा लगाउने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन। त्यसैले १८ वर्षमुनिकालाई खोप उत्तम विकल्प भएपनि लगाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर उहाँहरुलाई जोगाउनु नै उत्तम विकल्प हुनेछ।
सामाजिक सञ्जाहरुमा खोप लगाएपछि संक्रमण बढेको भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको पाइएको छ। खोप लगाएर संक्रमण बढ्दैन।
कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि मृत्यु हुने सम्भावना करोडौंमा एक हुनसक्छ। त्यसैले खोप लगाउनुपर्छ।
कोभिसिल्ड खोप लगाएपछि जोनसोन एण्ड जोनसोनको खोप लगाउने कुराको विषयमा– जोनसोन एण्ड जोनसोन फरक खालको भ्याक्सिन भएकाले कोभिसिल्ड लगाएकाहरुलाई यो खोप लगाइदैन। नेपाल सरकारलाई यो खोप प्राप्त भयो भने नयाँ समुहलाई लगाउने छौं।
खोप लगाएकामा पनि संक्रमण भएको कुरामा– केहीलाई संक्रमण भएपनि दुवै डोजको खोप लगाउनेलाई संक्रमणको जोखिम कम छ। संक्रमण भएपनि अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने तथा मृत्यु हुने दर पनि कम छ।
तर, कुनैपनि खोप सतप्रतिशत हुँदैन। तर, केही बचाउन सकिने भएकाले खोप लगाउनुपर्छ।
स्थानीय तहले आफैंले खोप खरिद गर्ने भन्ने जानकारी गराएकोमा स्थानीय तहले खोपको लागि बजेट छुट्याउने कुरा राम्रो हो। तर, सबै स्थानीय तहले आफैंले खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया, भण्डारण, प्राविधिक कुरा, कोल्डचेनको व्यवस्थापन र त्यसबाट हुने जोखिम नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पहिला नै सबै नागरिकलाई खोप लगाउने घोषणा गरिसकेको भएर खोप लगाउन स्थानीय तहले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।